TARRAGON: HALABUURKA, SIFOOYINKA FAA'IIDO IYO KHILAAFAADKA GEEDAHA TARRAGONKA - SOOSAARKA DALAGGA
Hooyooyinka intooda badani waxay xiiseynayaan waxa ka kooban tarragon iyo ujeedada loo isticmaalo. Warshad waxaa sidoo kale loo yaqaannaa "cawska taranka"oo waxay ka mid tahay caleenta cawska. Maqaalkani wuxuu kuu sheegi doonaa sifooyinka faa'iido leh ee warshadda, iyo sidoo kale ku saabsan cudurrada la daaweyn karo iyadoo laga caawinayo geedkan cajiibka ah.
Waxyaabaha kiimikada ee tarragonka
Qaybta kiimikada ee warshaduhu waxay ka caawisaa in ay fahmaan meelaha ay ka mid yihiin iyo kuwa cudurada loo isticmaali karo. Sidaa darteed, tusaale ahaan, qof walba waa ogyahay phytoncides, taas oo ku jirta toonta. Kaliya xaqiiqadani waxay suurtogal u tahay isticmaalka isticmaalka badan ee geedka.
Sidoo kale, marka laga reebo dhinacyada waxtarka leh, ka kooban kiimikada ayaa sidoo kale ka hadlaysa saameynta daawada ama dulqaad aan macquul ahayn.
Halbeegga cawska tarragon waxaa ka mid ah waxyaabaha soo socda:
carotene (antioxidant, wuxuu yareeyaa halista kansarka);
alkaloids (ka ilaali cudurka iyo xakamaynta hababka muhiimka ah);
flavonoids (antioxidant, waxay leedahay ficil antimicrobial);
coumarin (Dhiiga dhiigga, waxay ka hortagtaa sameynta xinjiro dhiig).
Waa muhiim! Iyada oo la yaraynayo xinjirta dhiigga, laguma talinayo in la isticmaalo tarragon, maaddaama hantidoodu ay sii xumeyneyso dhibaatada.
Ka mid ah sifooyinka wanaagsan ee tarragon -maadooyinka sare ee fiitamiinada A iyo C - in ka badan 11%. Faytamiin A ayaa mas'uul ka ah ilaalinta difaaca jirka iyo caafimaadka maqaarka, iyo fitamiin C waxay gacan ka geysaneysaa xoojinta iyo sameynta habka difaaca jirka.
Iyadoo ku saleysan arintan, waxaan ku soo gabagabeyn karnaa in tarjunku uu aad u fiican yahay xoojinta shaqooyinka ilaalinta jirka iyo ilaalinta maqaarka iyo indhaha ku sugan xaalad caafimaad leh.
Sidoo kale qaybta tarragonka waxaa ku jira fitamiino kale (B1, B2, PP) iyo walxaha raadraaca (potassium, magnesium, sodium, calcium iyo fosfooraska).
Tarragon kalooriga waa 24.8 kcal / 100 g.
Saameynta wanaagsan ee cawska tarragon on jirka
Magaca kale ee tarragon - "geedka qorraxda". Waxyaabaha ay ka kooban tahay ayaa hodan ku ah fitamiinada kala duwan, walxaha raadraaca iyo saliidaha, kuwaas oo leh waxyaalahan soo socda:
antimicrobial iyo antiviral.
Marka laga soo tago kor ku xusan, tarragon cunidda, waxaad yareyn doontaa fursadda kansarka, wadnaha iyo istaroogga. Daawada Tibetan, dixiriga masduulka ayaa loo isticmaalaa daaweynta oof-wareenka iyo boronkiitada sida daawada ugu weyn. Si kastaba ha ahaatee, waa in la xasuustaa in hantidii kasta ay muujinayso isticmaalka saxda ah ee geedka, haddii uu yahay decoction ama neefsiga saliidaha lagama maarmaanka ah.
Ma taqaanaa? Tarragon waxay leedahay magaca sayniska "Artemisia dracunculus", oo loo isticmaalo in lagu muujiyo noocyada kala duwan ee qorraxda oo laga soo qaatay Giriigga "casriga", taas oo macnaheedu yahay "caafimaad leh."
Diyaarinta iyo kaydinta tarragonka cayriinka ah ujeedooyin caafimaad
Xitaa bilowga billowgii kowaad, cagajiyayaashu waxay adeegsadeen tarragon sida mid ka mid ah daawooyinka muhiimka ah ee daaweynta cuduro badan. Maalmahan, waxaad soo saari kartaa daawooyinka dhirta oo keliya ma'aha hal ama laba bilood, laakiin sidoo kale dhowr sano.
Si haboon u ururinta maskaxda maskaxda laga bilaabo marxaladda wajiga. Haddii aad bilowdo waqti hore ama ka dib, dhammaan saamaynta faa'iido leh waa la lumayaa. Dhammaan qaybaha xayawaanka (caleemaha, dhirta, ubaxa) waxay ku habboon yihiin ururinta iyo isticmaalka dheeraadka ah. Waqtiga ugu fiican ee la ururiyo waa subaxa ama fiidkii. Xulo maalmaha aruurinta si aaney jirin wax roobab ama qoyaan badan.
Waa muhiim! Sannadka ugu horeeya ururinta waxaa la qabtaa bilaha Ogost ama Oktoobar. Mustaqbalka - laga bilaabo Abriil ilaa Oktoobar.
Qaybta kor ku xusan waa la gooyaa ilaa 10 cm oo ah asliga ah ayaa ka sii sarreeya dhulka. Haddii aad wax badan jaraysay, waxyeelo geedka.
Isla markiiba ka dib markaad uruuriso, ku dheji goobaha madow ee meel qabow ah. Grass ayaa lagu kaydin karaa qaboojiyaha, laakiin aan ka badnayn laba toddobaad. Ka dib markaa, waxaad u baahan tahay inaad geliso alaabta ceeriin si aad u shaqeyso iyo kaydinta dheeraadka ah.
Ka hor intaadan dooran habka kaydinta, go'aamiya ujeedka ujeedada aad adigu geyneyso geedka. Maadaama shaaha leh salted salted aadan samayn karin, iyo tarragon ee saliidda ma noqon karo ku habboon ujeedooyin daaweyn.
Aynu bilowno habka ugu fudud ee kaydinta - qaboobeyn. Si arrintan loo sameeyo, waxaad dhaqdaa geedka la goostay oo qalalan (ma aha talin si loo isticmaalo qalajiyaha korantada). Marka xigta, gooynta taranka googooyo yar yar oo ku rid bacyada blaastikada. Baakooyinka waxay ubaahan yihiin inay xiraan oo qaboojiyaan (heerkulku waa inaanay ka badnayn min 5-7 ˚C).
Waa muhiim! Qaybaha la diiriyay mar dambe dib uma dhigin, maxaa yeelay badi guryaha hantida leh ayaa lumaya.
Habkan kaydinta waa mid guud. Waxaad isticmaali kartaa alaabta la qaboojiyey ee loo isticmaalo cunto karinta iyo cabitaanka, iyo daaweynta cudurada kala duwan. Haddii lagu xakameynayo alaabta aan ku habboonayn, waxaad isticmaali kartaa siyaabo kale oo lagu keydiyo cawska.
Guntanka qalalan. Ku qallaji furayaasha furan si aan qorraxdu ugu dhicin geedka. Iska yaree geedka qoyan ee rucubada iyo daboolo dushooda. Qallajinta waqti badan ma qaadanayso, sida cawska kuma jirto qoyaan badan. Ka dib qalajinta, caleemaha iyo caleemaha waxaa la jajabiyey oo lagu kaydiyaa barmiilaha si adag u xiran (uma baahnid in la isku rogo).
Tarragon salad ah waxay yareysaa isticmaalka loogu talagalay, laakiin ma diidi karo caleemaha iyo ciirashada casiirka, sida marka qalajinta. Greens waa la maydhaa oo la dhigaa maro si ay u qalalaan. Ka dib markaa, isku qasan milix (200 g halkii 1g oo ah cawska tarragon) iyo tampered glass dhalooyinka ee barokac yar. Gasacyada waxaa lagu xiray daboolyo silikoon ah oo lagu keydiyay meel qabow.
Fursadaha kale ee kaydinta:
Hababkan kaydka ah ayaa aad u dhif ah, maxaa yeelay tarragon ee foomkan ma aha mid ku haboon ujeedooyinka daawooyinka.
Sida kor ku xusan, tarragon ee daawada dad ayaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cuduro badan. Bal qiyaas cuntooyinka ugu caansan ee daawooyinka ku salaysan geedaha tarragonka.
Wixii daaweyn ah hurdo la'aan
Dhibaatada hurdada iyo hurdada xun waxay ogtahay jiilalka oo dhan. Mararka qaarkood tani waa dhibaato waqti gaaban ah, laakiin sidoo kale waxay dhacdaa in qofku aanu si caadi ah u seexan karin bilaha. Gooryaanka digaagga ah (tarragon) ayaa u fiican caloosha.
Si aad u sameysid decoction, waxaad u baahan doontaa tarragon qalalan. Qaado oo ah geedo yaryar ku shub 300 ml oo biyo ah kuna kari 5-6 daqiiqadood. Ka dib markii maraq this ku adkeyso 1 saac iyo filter. Waqtiga jiifka, rinjiga shukumaan ama faashad daawo oo ku sii daa madaxaaga.
Waa muhiim! Haddii aad cabto maraq, taas oo loogu talagalay isticmaalka dibadda, saameyntu waxay noqon kartaa ka soo horjeeda.
Wixii daaweyn cambaarta iyo dermatiga
Geedaha Estragon wuxuu ku habboon yahay daaweynta maqaarka dhibaato.
Wixii diyaarinta cadarka waxaa loo isticmaalaa kaliya tarragon qalajiyey, taas oo ah in ay noqoto dhulka ku budo ah. Ka dib markii in, ku dar malab (300 g oo cawska 100 g oo malab ah) oo isku qasan. Biyaha ka soo baxa waxaa loo adeegsadaa meelaha maqaarka ee maqaarka ah isla markaana si tartiib ah u dhaqdhaqaaqa. Koorsada daaweyntu waa mid aan xad lahayn, sidaa darteed waxaad isticmaali kartaa cadarka si aad u hesho saameynta la rabay.
Wixii daaweynta neurosis
Tarragon wuxuu isu dhejiyey sidii sedor, sidaas darteed waxaa badanaa loo isticmaalaa dareemayaasha kala duwan.
Si aad u diyaariso maraq ah qaadan 1 tbsp. l tarragon qalalan iyo brewed 300 ml oo biyo ah karkaraya. Ku adkee illaa 50-60 daqiiqo oo sifudud. Faleebo waa in la wada baabbi'iyaa 3-4 jeer maalintii, 100 ml cuntada ka dib.
Ka hor intaadan isticmaalin, waa inaad la tashataa takhtar, maadaama daroogada qaarkood ay yareyn karto dareenka. Haddii aad qaadato daawooyin kale, waa inaad hubisaa in ay ku habboon yihiin tarragon.
Wixii daaweynta stomatitis
Haddii ay dhibaato ka haysato cirridka ama xuubka xuubka afka, kadibna dib u dhig isticmaalka daawooyinka. Saliid ka samaysan badeecadda la qalajiyey ayaa iman doonta badbaadinta.
Isku qas caleemo yar yar oo la jarjaray (20 g) iyo 100 g oo ah subagga. Waxaan kugula talineynaa isticmaalka subagaha guriga, sababtoo ah ma jiro wax margarin ah. Ku walaaq isku dar kulul yar ilaa 12-15 daqiiqadood.
Cabbirada waa in lagu riixaa cirridka ugu yaraan 3 jeer maalintii si loo helo saameyn togan. Daaweyntu waa inay socotaa ugu yaraan hal bil. Haddii uu cudurku bilaabay inuu horay u sii wado, la tasho dhakhtarkaaga ilkaha wixii xasaasiyad ama xasaasiyad daraadeed.
Si loo hagaajiyo rabitaanka cuntada
Geedaha Estragon wuxuu kobciyaa sameynta casiirka gastric, sidaas darteed waxaa loo isticmaalaa in lagu hagaajiyo cunto xumo.
Ma taqaanaa? Waagii hore, Jarmalka, tarragon cusub ayaa hilmaamay hilibka iyo ciyaarta si aysan duqsigu u fadhiisan.
Si aad u sameyso shaah aad u fiican, waxaad u baahan doontaa:
1 tsp tarragon qalalan;
3 tsp. shaaha (cagaar, madow ama geedo);
30 g diirka roogga.
Waxyaabaha ay ku jiraan koob iyo ku shub biyo karkaraya. Shaaha waxaa la mariyaa 10 daqiiqadood, ka dib markaad u baahan tahay inaad ku darto biyo kulul oo aad u baxdo ilaa 15 daqiiqo. Shaah Ready ah ayaa loo isticmaalaa sida dhirta. Ku dar sonkorta ama malab si cabitaanka tarragon dhamaystiran si aad u dhadhamiso.
Si loo hagaajiyo caafimaadka guud
Si loo wanaajiyo caafimaadka guud waxaa lagula talinayaa in la qaato barkada tarragonka. Daaweyntan ayaa dejisa nidaamka dareenka, waxay ka nadiifisaa maqaarka waxayna ka qaadaa sunta jirka. Brew caleemaha la qalajiyey iyo caleemaha xayawaanka tarragon, ha diyaari istaag iyo ku dar ilaa qubeyska buuxsan. Ka dib marka aad qubeysid, waxaad dareemi doontaa nalal iyo nadiif, urka wanaagsan ee saliidaha lagama maarmaanka ah kaliya ma aha wax faa'iido leh, laakiin sidoo kale waa ku qanacsanaanta nidaamka noocan oo kale ah.
Iyada oo xididdada varicose
Dhibaatada joogtada ah ee dadka da'da ah waxaa lagu xalliyaa tarragon ku salaysan cadaadis. On meelaha leh xididdada oo barara oo isku dhafan isku dar ah 2-3 tbsp. l la jarjarey iyo 500-600 ml oo ah kefir dhanaan cusub (sidoo kale kugula talin inaad isticmaasho jelly guriga).
Cadaadiskan waxaa la isticmaalaa 2-3 jeer maalintii. Ka saar maqaarka si aad u qallajiso. Isku day inaadan iska ilaalin boomaatada muddo ka badan 6-7 saacadood si maqaarku u neefsado caadi ahaan.
Waa muhiim! Haddii aad xasaasiyad ku leedahay waxyaabaha caanaha laga sameeyo, la tasho dhakhtar intaadan dalban biyaha.
Geedaha Estragon ee warshadaha cadarka
Isticmaalka tarragon ee warshad cadarka sababtoo ah joogitaanka saliidaha lagama maarmaanka ah, kuwaas oo ah dareer aan cadaan ama midab lahayn oo leh uris aiseed.
Geedaha Estragon waxaa loo isticmaalaa perfumers si ay u bixiyaan iftiin iyo qora cagaaran cagaarka.
Isla markiiba, dhadhanka dheeriga ah ee tarragonka ayaa lagu qiimeeyaa aduunka oo idil, sida lagu soo saaro maaddooyinka dabiiciga ah. Saliidda Tarragon-ka waxay leedahay saameyn liddi ku ah antimicrobial oo aan lumin marka lagu daro cadar. Intaa waxaa dheer, qiimaha ku salaysan xayawaanka tarragon waxay leeyihiin caraf joogto ah oo aan isku darin urta dibedda.
Ma taqaanaa? Faransiisku waxay ahaayeen kuwa ugu horreeya ee isticmaala tarragon ee cunto karinta, markii tani lafdhabarashadii loo keenay Europe qarnigii 17aad. Waxay ahayd halyeeyada Faransiiska ah ee soo bandhigay cuntooyinka cunto kariska.
Isticmaalka tarragon ee karinta
Tarragon wax lagu karsado ayaa loo isticmaalaa inta uu ka kooban yahay noocyada kala duwan ee suxuunta.
Codso warshad ah qaabka loo yaqaan 'seasoning'. Gaar ahaan dhadhanka dhadhanka ee tarragon waxaa lagu muujiyey in la isku daro alaab shub ah. Warshadani waxay noqotaa mid aan lagama maarmaan ah markaad u baahan tahay inaad si degdeg ah u sameyso marinade ama pickles. Waxay ka kooban tahay walxo leh waxyaabo liddi ku ah bakteeriyada, taas oo macnaheedu yahay in alaabta la kariyey aysan ka sii dari doonin.
Caleemaha cusub ee la qalajiyey iyo qalajinta ayaa sidoo kale loo adeegaa hilibka la shiilay, hilibka, ukunta la shiilay ama kalluunka. Caleemaha la jajabiyey ayaa lagu daraa suxuunta ugu horeysa: maraqa, okroshka iyo maraqa. Sidaa awgeed, dhirta ayaa lagu dari karaa saxan kasta iyada oo aan halis ugu jirin inay ku dhufato.
Waxaan soo bandhignay cunto karis ah oo ku salaysan xawaashka tarragonka.
Suugo digaag leh oo lagu daro tarragon. Cuntooyinka maaddooyinka:
digaag (3-4 gogo ');
300 ml oo ah maraq digaag;
80-100 g tarragon qalalan;
120 ml oo khamri cad cad oo qallalan;
200 ml oo labeen dhanaan ah;
basasha (1 madax);
cusbo / basbaas.
Fiiri basasha digsi qabow ilaa buni dahab ah (isticmaal digsi qoto dheer leh). Ka dibna si taxadar leh ugu dar digsiga maraq ugu horeysay, ka dibna - khamri. Walaaq, isku kari ilaa iyo 5 daqiiqo. Xardhey dukaanka digaag yar oo googo iyo ku dar maraq.
Isku kari ilaa 15 daqiiqadood kuleylka hooseeya. 5 daqiiqo ka hor intaan u diyaargarayn ku dar labeen dhanaan, tarragon iyo mustard. Walwal dhowr jeer inta lagu jiro karinta. Ku dar milix iyo basbaas dhammaadka karinta.
Marka laga soo tago cuntooyinka iyo tilmaamaha, waxaad u baahan tahay inaad xasuusato xoogaa yar ee isticmaalka tarragon ee karinta:
In lagu kariyo, kaliya oo la qalajiyey, saliid ama salfad cusbayn loo isticmaalo. Warshad cusub ayaa siin doonta qadhaadh oo keliya (inta lagu jiro daweynta kulaylka).
Iyada oo ku saleysan tarragon kartaa vodka (dhalada dhowr wiig ah ku rid sprig of tarragon qalajiyey). Natiijada, khamriga ayaa uraya oo dhadhan doona miro duurjoogta ah.
Tarragon waxaa loo isticmaalaa in lagu daro urka jilicsan si khal iyo khal. Si tan loo sameeyo, ku dar awoodda caleemaha geedka. Natiijo ahaan, waxaad heli doontaa ur aan caadi ahayn iyo dhadhan qafiif ah.
Geedaha Estragon waa in lagu daraa saxanka 5-7 daqiiqo ka hor diyaargarowga si loo ilaaliyo guryaha caafimaadka leh iyo dhadhanka dhirta.
Sida loo sameeyo cabitaan ah geedo tarragon at guriga
Lemonade "Tarragon" waxay yaqaanaan dadka waaweyn iyo carruurta. Dhadhanka soodhawrka waxaa u sabab ah tarragon, kaas oo ku jira qayb ka mid ah, Waa sahlan tahay in la sameeyo delicious, iyo ugu muhiimsan, cabitaan caafimaad oo laga helo geedo tarragon ah guriga.
Si aad u sameysid liinta waxaad u baahan doontaa waxyaabahan soo socda:
1 litir oo biyo ah macdanta laga sameeyey;
farabadan balaadhan oo ah tarragon cagaaran.
In blender ah, liin, sonkorta iyo tarragon ayaa la jabiyey. Marka xigta, isku dar ah qallalan ayaa lagu shubay biyo waxaana loo oggol yahay inay soo dhaamiso. Ka dib markaa, ku shub hal galaas oo lagu daro barafka. Cabbitaanka waa diyaar!
Waa muhiim! Lemon waa la dhimi karaa haddii aadan u dulqaadanin cuntooyinka dhadhanka.
Nooca labaad ee "Tarragon" - iyadoo lagu darayo kalluunka liinta iyo kiwi. Wixii ah cocktail, waxaan u baahanahay:
500 ml oo macdan ah;
300 ml oo biyo ah loogu talagalay sharoobada;
tarragon cusub (ilaa 100 g);
4 caleemo oo ah kalluunka liinta;
Geedka melissa iyo cawska tarragon ee qasacadaysan. Biyo kulul, ku dar caleemo la jarjarey iyo sonkor. Kari kulayl yar ilaa 3 daqiiqo. Cool. Iyadoo cagaarka ay karkarinayaan, midhaha miraha la jarjar sharoobada. Sharoobada shub leh miro iyo la kariyey cagaarka leh sonkorta ku jirta muraayadaha. Ku dar baraf iyo cabitaan waa diyaar.
Marka lagu daro cabitaanka dhaqameed, warshadu waxay ka dhigtaa dhammaan noocyada kaluunka. Tarragon sidoo kale waxaa lagu daraa liishurs, tinctures iyo whiskey.
Khilaafaadka isticmaalka tarragonka
Waxaan ka wada hadli doonnaa khilaafaadka suurtogalka ah ee tarhuna iyo saameynta daawooyinka ka dib marka la isticmaalo.
Markii hore waxaan ogaanay in tarjunku ka hortagi karo kansarka, laakiin isticmaalka dheeraadka ah ee loo yaqaan 'seasoning' (tirada badan) wuxuu u horseedi karaa abuurista kansar. Sababta ayaa noqon karta maaddada methyl fibrean, kaas oo ku jira qayb ka mid ah dhirta.
Haddii aad xasaasiyad ku leedahay chrysanthemums ama daisies, ka dibna isticmaalka tarragon wuxuu keeni doonaa reaction sida isku mid ah, sida dhirta iska leh qoyska isla.
Geedaha Estragon ayaa ka hortagaya daacuunka iyo cudurada mareenka kaadida. Inkastoo xayawaanku uu kor u qaadayo dhagxaanta dhagxaanta, waxay dhaqdhaqaaqooda u horseedi karaan cawaaqib culus.
Waa mamnuuc inaad u isticmaasho dhirta qaab kasta inta lagu jiro uurka. Halbeegga tarragon waxaa ka mid ah thujone, taas oo keeni karta in lumo ilmo ama ka lumin haweeney caanaha caanaha.
Isticmaal tarragon leh taxadar. Marka lagu daro sifooyinka bogsashada, tixgeli khilaafaadka tarragon, taas oo keeni karta waxyeello ka badan ta wanaagsan. Xasuuso in dawo kasta ay ku noqon karto sunta haddii aad u isticmaashid iyada oo aan loo baahnayn.